VMware software နဲ့ putty software အကြောင်း...
VMware software နဲ့ putty software အကြောင်း...
Thread: VMware software နဲ့ putty software အကြောင်း...
12-18-2010 06:33 PM #11
Mediafire Link ကတော့ ကောင်းပါတယ်...
The Following User Says Thank You to ကိုဦး For This Useful Post:
03-25-2011 11:59 AM #12
အစ်ကိုကြီး ရာမညဖိုးလပြည့် sorry ပါ
ရသွားပါပြီး ရှင်ပြီးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ူLOVE IS BLUE
05-17-2011 05:36 PM #13
အစ်ကိုတို့ရေ vmware နဲ့ virtual server 2003 ကို virtual window xp တို့ကို pc တစ်လုံးထဲမှာ ဘယ်လိုချိတ်ရသလဲ ဆိုတာသိချင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှချိတ်လို့မ၇လို့ပါ၊ တကယ်လို့၇၇င် vmware ကို ဘယ် version သုံးသလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
05-18-2011 11:34 PM #14
vmware တစ်ခုဆီမှာ သုံးထားတဲ့ vitual network card တွေရဲ့ ip နဲ့ type တွေကို
စာရင်းလုပ် ပြီး capture ၇ိုက်တင်ပေးပါ။
type တွေက ဥပမာ vmware net 1 (bridge)
vmware net8 (host only ) စသည်ဖြင့်
ဘယ်ကတ်ကို ဘယ် vmware os နဲ့ချိတ်ထားသလဲ။ ပြီးတော့ host OS ( သင်အသုံးပြုနေသော တစ်ကယ့် OS) တွင် ရိုက်ထားသော IP address နှင့် host OS နှင့် ချိတ်ထားသော Guest OS (vmware OS) netcard များ ရဲ့ ipaddress များ တင်ပေးနိုင်ပါက ပိုဖြေရှင်းရလွယ်ကူပါမယ်။
The Following4Users Say Thank You to yeakharr For This Useful Post:
chit tee, William Paul, တာယာ, မတ်သံလုံ
07-26-2011 01:57 PM #15
The Following4Users Say Thank You to မတ်သံလုံ For This Useful Post:
Crystal Boy, tunaungkyaw, William Paul, ချင်းတွင်းသား
01-13-2015 08:11 PM #16
no/34,sign tan / MTLA
ပို့စ် က တင်တာ ကြာပြီလား မသိဘူး...ကျွန်တော် တွေ့တဲ့ လင့်ခ် ကို ပြန်တင် ပေးလိုက်ပါတယ်နော်...။
Last edited by caspernimo; 01-13-2015 at 08:13 PM.
The Following2Users Say Thank You to caspernimo For This Useful Post:
CFD software အကြောင်း သိချင်လို့ပါ ခင်ဗျာ
By tuntunzaw in forum စက်မှုအင်ဂျင်နီယာပညာ
Last Post: 11-11-2014, 01:47 AM
Sketup Software နှင့် သူ၏ ဆက်စပ် software များ
By papagyi in forum Sketch up
Last Post: 09-16-2014, 06:09 PM
Software Engineering Software Testing& Software Development Cycle
By pooh.kglay in forum အထွေထွေသတင်းများ